ब ला त्का रीलाई फाँ*सी दिने का’नुन बनाएर नारीहरूको र’क्षा गर्न किन हि’चकि’चाउँछ सरकार ? – AB Sansar
September 28, 2020 adminLeaveaComment on ब ला त्का रीलाई फाँ*सी दिने का’नुन बनाएर नारीहरूको र’क्षा गर्न किन हि’चकि’चाउँछ सरकार ?
राधा पोखरेल । जं’गली युगमा मा न्छे ना ङ्गै ब स्थे । पशुवत चेतना र जीवन थियो मान्छेको । आज जस्तो सामाजिक नियम, कानुन, मर्यादा, ढोंग, बन्धन केही थिएन । साँच्चै निर्बन्ध थियो मान्छे । पशु जस्तै । अ’स्तित्वको संघर्षले मान्छे आज विकसित युगमा आ’इपुगेको छ । तर अहिले विश्वबन्धुत्वको भाव र मानवतावाद क्षीण हुँदै गइरहेको छ । सामाजिक सीमा र मर्यादा उलंघन हुने क्रम बढ्दो छ । ******थप भिडियो” हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोस’, *****
मान्छे सामाजिक प्राणी हुनाको ना ताले उसको व्यक्तिगत स्व तन्त्रता, सा माजिक हित अधीनस्थ पनि हुनैपर्छ । नत्र मान्छे जंगली युगमा नै फर्कनेछ । खा सगरी कि शो रीहरू ब ला त्कृत हुने र हत्या गरिने मु टु चि मो’ट्ने स मा’चारहरू प्रत्येक दिनजसो आइरहेका छन् । निर्मला प’न्तको ब ला त्का र र ह त्याको समाचार त अ न्तरराष्ट्रिय नै बन्न पुग्यो । सर कारले ब ला त्का री, ह त्या’रालाई अ हिलेसम्म गिर फ्तार गर्न सकेको छैन ।
यस्ता दुःखद घ टनाले नेपाल र नेपालीको शीर अ न्तरराष्ट्रियरूपमै झुक्न पुगेको छ । वि श्वसामु हामी नेपालीको बेइ ज्जत भएको छ । ज ताततै यस्ता म हिला हिं साका घट ना भइरहेका छन् । हिं सा घ ट्नुको सा टो ब ढिरहेको छ । असु रक्षाको आतं कले हामी नेपाली ना रीहरू मा नसिक रो गी बन्दै ग इरहेका छौं । सा च्चै स म्झँदा मात्र पनि मू र्छा परि एला ज स्तो हुन्छ । साँ च्चै देश हेर्दा कहीँ, कतै चित्त बु झाउने ठाउँ छैन ।
धर्म, सं स्कृति र परम्पराको नाममा इ तिहासदेखि वर्तमानसम्म ह जारौं होइन, लाखौं नेपाली चेलीहरूले ज्यान गुमाइसकेका छन् । अनि राज्य र शासकहरू यहि समा’जको पक्षमा वका’लत गरिरहेका छन् । एक पछि अर्को यस्ता घटना आ’इर’हदा देशकै बेइ ज्जत भए’को छ । अब राज्य गम्भीर बन्ने बेला भएको छ र व ला त्का र बि रुद्ध स म्बन्धित सबै निकाए क’ठोर बनेर क’डा भ न्दा क डा कदम चाल्नु आ वश्यक छ। दुधे बा’लिका देखि वृ’द्धालाई सम्म नछा ड्ने यौ नपि पा सुहरूलाई फाँ सी दिने का नुन बनाएर ना रीहरूको रक्षा गर्न किन हि च’किचा उँछ सरकार ?
यस्तो गाउँ जहाँ भाई र बहिनी एक आपसमा विवाह गर्छन्
संखुवासभा घट्ना; यिनै हुन् २६ वर्षीय भतिज लोकबहादुर कार्की जसले ‘हेपाई’ सहन नसक्दा गरे कहालीलाग्दो ह त्या !
September 11, 2021 September 11, 2021 Ab-संसार